Ny Wiki as Demokratika rehefa mieritreritra ianao? & Ndash; Fomba fiasa matihanina amin'ny Semalt
Ny Wiki as Demokratika rehefa mieritreritra ianao? - Fomba fiasa matihanina amin'ny Semalt
Ny fikarohana samihafa dia maneho fa ny tonian'ny fanontana dia tompon'andraikitra amin'ny famoahana sy famoahana pejy maro ao amin'ny Wikipedia. Oliver King, ilay manam-pahaizana Semalt , mino fa azo antoka ny filazàna fa Wikipedia no malaza indrindra amin'ny rakipahalalana an-tserasera. Sorin Adam Matei, profesora avy ao amin'ny Oniversite Purdue Brian Lamb, niara-niasa tamin'i Brian Britt, mpikaroka sy mpanampy mpampianatra momba ny fifandraisana sy ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny Oniversiten'i South Dakota ary nanazava hoe iza no manome ny ankamaroan'ny lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia.
Nahomby tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra rehetra tao amin'ny Wikipedia izy ireo ary nanandrana nandika azy ireo tamin'ny fiteny samihafa, nanomboka tamin'ny 2001 ka hatramin'ny 2010. Ny mpanoratra sy ny tonian-dahatsoratra manintona indrindra dia nofantenana handrafetana ny lahatsoratra amin'ny Wikipedia, ary ny mpamoaka lahatsoratra ihany no afaka mamoaka ny votoatiny.
Nilaza i Matei fa ny zavatra hitan'izy ireo sy hitan'izy ireo dia ny fitarihana mazava izay vao haingana. Manana andian-mpanoratra sy tonian-dahatsoratra izy ireo izay tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny votoaty sy miasa mafy manodidina ny famantaranandro hamoahana ny votoatiny sy ny votoatiny marina ao amin'ny Wiki. Ireo tonian-dahatsoratra ireo dia namolavola ny fandaharam-potoana, ary izy ireo dia tarihin'ny fahatsapana andraikitra, toy ny hetsika ara-pinoana sy ara-politika.
Manamafy ihany koa ny manam-pahaizana fa ny editor-in-chief sy mpanoratra ao amin'ny Wikipedia dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana valopolo isan-jaton'ny lahatsoratra. Tsy niova io fifandraisany io, ary nanova ny paik'izy ireo tamin'ny fotoana ny mpanoratra sy ny mpamorona.
Amin'ny fotoana iray, misy olona iray mitondra ny vondrona mpanonta. Ny hevitr'izy ireo dia ny mamolavola ny zavatra fantatry ny olona izay manome azy ireo ny fahombiazany. Britt sy Matei dia nanoratra boky vaovao mitondra ny lohateny hoe Structural Differentiation amin'ny Media sosialy: Adhocracy and Entropy. Ity boky ity dia manazava ny fomba nahatonga an'i Wikipedia ho lasa tranonkala ahafantarana sy ny rakipahalalana tena izy marina ao amin'ny aterineto.
Namolavola izany ny olon-dehibe sy ny manam-pahaizana, fa ny sasany kosa dia niaina lavitra kokoa noho ny hafa. Ny mpikaroka sasany dia nahita fa Wikipedia dia tranonkalan-tranonkalan'ny fandaminan'olombelona ary manaraka ny lalan'ny evolisiona. Avy amin'ny fandraisana andraikitra tsotra sy tsotra ho an'ny birao ara-panjakana, miankina amin'ny Wikipedia avokoa ny rehetra satria io no loharanom-baovao tsara indrindra amin'ny aterineto.
Ny bokin'i Britt dia nanolotra karazan-javatra mahaliana sy mahasoa momba ny fomba fiakoana vaovao eo amin'ny tontolon'ny fifandraisana. Izy io koa dia manasongadina ny fivoaran'ny vondrona media sosialy amin'ny fotoana.
Adraky dia toerana manokana, toy ny Wikipedia, ary ny rafitra fandaminana no mandrindra izany. Izy io dia mampifandray ny ambaratongam-pitokisana sy matanjaka miaraka amin'ny fahaleovantenan'ny tsirairay. Wikipedia dia manana tahiry betsaka, lahatsoratra, ary votoaty amin'ny fiteny samihafa, ary ny tonian-dahatsoratra dia entanina hanangana lahatsoratra tsy hita ao amin'ity rakibolana goavana ity. Azo antoka ny filazana fa misy amin'ny fiteny maherin'ny telonjato ny Wikipedia, saingy ny ankamaroan'izy ireo dia tsy ampy sy kely. Ny olona avy amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao dia mitsidika ny Wikipedia isan'andro ary mamaky ny edisiona amin'ny fiteny 300 mahery.
Ny sasany amin'izy ireo dia mikaroka lahatsoratra sy votoatiny manokana nosoratan'ireo mpanoratra an-jatony an'arivony izay tompon'andraikitra amin'ny fananganana sy fitazonana ity rakipahalalana malaza sy maimaim-poana ity. Ny mpitsidika ny Wikipedia dia mitady ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy, ary ny fiteny hafa dia mirakitra ny lisitry ny 30 tapitrisa Wikipedia Source .